ပြည်တွင်းခရီးသွားခါနီး ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » ပြည်တွင်းခရီးသွားခါနီး ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲ
Posted by Shar Thet Man on Jul 26, 2018 in Travel |6comments
ဒါလေးကတော့ မွန်လေးကို chat box မှာ ညီမလေးတစ်ယောက်ကလာမေးလို့ အမခရီးသွားမယ်ဆို ဘာတွေပြင်ဆင်သွားလဲ
တဲ့။ ဒီတော့ ခု ပြည်တွင်းခရီးတစ်နေရာကိုသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရတာအတော်ပဲပေါ့နော်။ ပြည်တွင်းပဲသွားသွား၊
ပြည်ပပဲသွားသွား ယူတာကွာခြားတာက မှတ်ပုံတင်နဲ့ ပက်စ်ပို့ ပါပဲ။ ပြည်တွင်းဆိုမှတ်ပုံတင်ပေ့ါ။ ပြည်ပဆိုပက်စ်ပို့ပေါ့။
ပထမဦးဆုံး ပစ္စည်းတွေမမေ့ကျန်အောင်လို့ ပစ္စည်းစာရင်းတွေကို အရင်list လုပ်ပါတယ်။ အဲ့list ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ အမြဲမှတ်ထားပါတယ်။ အဲတော့ဘယ်ပဲသွားသွား ခရီးသွားတော့မယ်ဆို အဲ့စာအုပ်ကိုအရင်လှန်တော့တာပဲ။ အဲထဲမှာဆိုရင်
ကားပေါ်တို့၊ဟိုတယ်တို့ကပေးတဲ့သွားပွတ်တံကို တိုက်ရတာမကြိုက်လို့ အိမ်ကနေတိုက်နေကျ ဒီသွားပွတ်တံလေးကိုအမြဲ
သွားတိုက်ဆေးလည်း အိမ်ကတစ်ခါတည်းထည့်တယ်။ အသေးပေါ့။
ဒါလေးကတော့ အမြဲတမ်းယူတယ်။ လိုရမယ်ရ ကားပေါ်မှာ အေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လျှောက်လည်တဲ့အခါ နေကာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံး
✔အရင်ဆုံးတိုဒါဘူးထည့်တယ်။ L’oréal တံဆိပ်ပါ။ ငယ်ငယ်တည်းကအဒေါ်သုံးတာတွေ့ဖူးတော့ အရွယ်ရောက်လာ
✔ပြီးတော့ Whitening cream ကို ခုလောလောဆယ် Ganier ကထုတ်တဲ့ Sakura White လေးသုံးတယ်။ အနံ့လေးကြိုက်လို့။
✔Foundation cream L’oréal ထည့်ပါတယ်။ အဲ့ Whitening cream နဲ့ Foundation cream က ဘူးကနေရာယူလို့ ဆေးဘူး
✔Cream puff ကို L’oréal2way လေးထည့်ပါတယ်။
✔ပြီးတော့ Concealer ကို Mistine ကထုတ်တဲ့ Cover All spot correcting concealer လေးထည့်တယ်။ သူကလည်း မျက်
ချောင်ကျနေတာတို့၊ ၀က်ခြံပေါက်နေတာတို့ဆို ဖုံးဖိပေးတော့ မျက်နှာလေးကပိုလှသွားတာပေါ့။ အဲ့ပစ္စည်းကတော့ ၀ယ်ချင်ရင် Member လုပ်ထားမှရလိမ့်မယ်။
✔ပါးနီကျတော့ Mistine က ထုတ်တဲ့ Jubiss Cheek mousse tint လေးယူတယ်။ သူကလက်ညှိုးထဲထည့်ပြီး ကိုယ်အဆင်
✔နှုတ်ခမ်းနီက ခုလောလောဆယ် ၂မျိုးသုံးပါတယ်။ Revlon က Colorstay moisture stain နဲ့ Huda က liquid matteပါ။ ညီမလေးလက်ဆောင်ပေးလို့သုံးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးတော့ မွန်လေးက နှုတ်ခမ်းခြောက်တတ်တော့ versaline လေးအရင်လိမ်းပြီးမှဆေးတယ်။
✔မျက်ခုံးမွှေးဆွဲတံကလည်း မွန်လေးအတွက်မပါမဖြစ်ပါ။ ဘာလို့ဆို မျက်ခုံးမွှေးမကောင်းလို့လေ။ ဒီတော့ Fashion La Princesse Online Shop ကနေပဲ 3D brows secret Kiss beauty လေးဝယ်သုံးလိုက်တယ်။ အရောင်၃ ရောင်ရှိတယ်။ ကိုယ်က Light brown ကြိုက်လို့ အာ့ပဲဆိုးတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်။ ၃ဆင့်ပါတယ်။ ပထမမျက်ခုံးကိုအရာဖော်၊ လိုင်းထည့်၊ နောက်ကြာရှည်ခံအောင် ထပ်ဆိုးရုံပ။ မိန်းကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ် tattoo brow ဆိုးဖို့အချိန်ကိုမရတော့ ဒါလေးနဲ့က ဟုတ်နေတာပဲ။
✔ Eyelinerလေးထည့်ဖို့လိုသေးတယ်။ ဝိုင်းစက်တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံရဖို့ မွန်လေးကတော့ Mistine ရဲ့ Eyeliner လေးပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်။
✔နေပူထဲ တစ်နေကုန်လျှောက်သွားမှာဆိုတော့ C’care sun block လေးယူတယ်။ ဘူးကကြီးနေတော့ ဟိုတယ်မှာ အလကားပေးတတ်တဲ့ lotion ဘူးထဲမှာ ထည့်သွားလိုက်တယ်။ 
✔ရေမွှေးကလည်းမပါမဖြစ်လေနော်။ သူများတွေတော့မသိဘူး။ မွန်လေးက ကိုယ်မှာ အနံ့လေးမွှေးနေမှ လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သလိုခံစားရလို့။ အရင်ကတော့ ရေမွှေးတွေအစုံသုံးတယ်။ လက်ဆောင်ပေးတာတွေရော၊ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်တာတွေကော။ဒါပေမဲ့ခု အရွယ်ရောက်လာတော့ ကိုယ်ပိုင်အနံ့လေးရှိသင့်တယ်ထင်လို့ ခုနောက်ပိုင်းတစ်မျိုးထဲပဲသုံးပါတယ်။ အဲတာကတော့ရေမွှေးလိုမျိုး Body Spray Victoria Secret ကထုတ်တဲ့ Love Spellလေး..အနံ့လေးအရမ်းကြိုက်..အဲဒါလေးထည့်တယ်။
✔ပြီးတော့ မိန်းကလေးသုံး daily soft liner လေး။
ကိုယ်သွားမယ့်နေရာက မိုးနည်းနည်းရွာတတ်လို့ ဗီယက်နမ်က၀ယ်လာတဲ့ မိုးကာသားအပါးလေးယူတယ်။
✔ခါးပတ်လေးလည်းယူတယ်။ ဘာလို့ဆို ဂျင်းဘောင်းဘီလေးနဲ့ဆို ခါးပတ်လေးပါမှလည်းလှမှာကိုး။ အရမ်းဈေးမကြီးဘူး။ ဒီနေရာမှာ အကောင်းစားသုံးလည်းရတယ်။ မွန်လေးကတော့ အလယ်လတ်ပဲ Fashion La Princesse Online Shop ကရောင်းတာလေးတွေ့လို့ ၀ယ်လိုက်တယ်။ Quality ကတော့ရှယ်ပဲ။
ပြီးတော့ မျက်မှန်။ နေထိုးရင် မျက်စေ့စူးလို့။
ဦးထုပ်လည်းယူတယ်။ မွန်လေးကဦးထုပ် ခရေဇီဆိုတော့ ၂ခုလောက်ယူတယ်။
ကင်မရာ လည်းထည့်တယ်။ ခုခေတ်ကတော့ ဖုန်းနဲ့ရိုက်ကြတာခေတ်စားပေမယ့် မွန်လေးကဖုန်းကော action camera လေးကောယူတယ်။ သူက အခုံးလေးပါတော့ မြင်ကွင်းကိုကျယ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ ရေစိုလည်းခံတော့ ရေကူးကန်ထဲလည်းအပျော်ရိုက်လို့ရတယ်။ Fashion La Princesse Online Shop ကပဲ ၀ယ်လိုက်တယ်။ ဈေးလည်းအဆင်ပြေလို့။ သုံးရတာလည်းကောင်းလို့။
✔ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်လည်း ထည့်တယ်။
✔ဆေးဘူးတို့၊ အားသွင်းကြိုးတို့၊ အပ်တို့၊ ပီကေဘူးတို့လည်း ဆောင်တယ်။
ဖိနပ်အပါးလေးတစ်ရံထည့်တယ်။ လည်တဲ့အခါ အမြင့်တွေနဲ့ဆို ခြေထောက်နာလို့။
ကြော်ငြာဝင်ရဦးမယ်။ မွန်လေးကို Aya bankက ပေးထားတဲ့ credit card (MPU) နဲ့ Visa card ပါထည့်တယ်လို့။ သူကတော့ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ သုံးလို့ရလို့ ဘယ်သွားသွားပါတယ်။ debit မဟုတ်ဘူးနော်။ credit ပါ။ ငွေကိုဘဏ်ကထည့်ပေးထားတာ။ လကုန်မှရှင်းရုံပဲ။
ဒါလေးတွေကတော့ အလှူပါသွားလုပ်မှာဆိုတော့ အိတ်က၃အိတ်။
ခရီးကပြန်လာရင်လည်း ဒီခရီးအကြောင်းလေးကို review လေးပြန်ရေးပေးမယ်နော်။ ဘိုင်။
နိုင်ငံခြား လေယာဉ်ခရီး..အထူးသဖြင့် အမေရိကားဆိုရင်တော့.. သွားတိုက်ဆေးကစလို့.. အလှပြင်ပစ္စည်းတွေအကုန်အသိမ်းခံရမယ်..။
ဆိုတော့.. ပိုက်ဆံအိပ်လည်း.. ခရက်ဒစ်ကဒ်ထည့်မယ်ဆို..Blocking RFID Signals ပါတာမှ..
Blocking RFID Signals. You can block signals from being transmitted to and from RFID chips with metal, and almost any kind will work. You could just wrap all your stuff in aluminum foil, but if you want to bealittle more stylish about it you can buy wallets with RFID protection or even make your own
သွားတိုက်ဆေးကစလို့.. အလှပြင်ပစ္စည်းတွေအကုန်အသိမ်းခံရမယ် ဟုတ်လား ကိုယ့်luggage ထဲထည့်မှာကို ဘယ်လိုလုပ်
အသိမ်းခံရမှာလဲ..ipad တောင် luggage ထဲတာဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဟီး credit ကလည်းဘယ်နိုင်ငံသွားသွားသယ်နေကြပဲ။
အော် အဲ့ထဲတော့ဘယ်ထည့်မလဲ..20kg ပေးတဲ့ထဲပဲထည့်မှာပေါ့
ယွကျားလေးတေကတော့ မမေ့သင့်တာ တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တာပဲ။